HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester City, Chelsea iyo Liverpool oo dhamaantood xiiseynaya Lautaro Martinez
Manchester City , Chelsea iyo Liverpool ayaa dhamaantood lagu soo waramayaa inay il gaar ah ku hayaan horumarka ku xeeran weeraryahanka dhexe ee kooxda Inter Milan Lautaro Martinez .
23 jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay kooxda Barcelona intii lagu jiray suuqii xagaaga ee la soo dhaafay laakiin ugu dambeyntii wuxuu la sii joogay kooxda Inter wuxuuna ku riyaaqay olole kale oo xoogan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Argentina ayaa dhaliyay 18 jeer, waxaana uu diiwaangaliyay sagaal caawin 46 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan kooxda Antonio Conte , oo dhawaan xaqiijisay hanashada horyaalka Serie A.
Martinez ayaan weli heshiis cusub u saxiixin San Siro, inkastoo mustaqbalkiisa markale shaki la gelinayo madaama uu ku dhow yahay labadii sano ee ugu dambeysay qandaraaskiisa Italy.
Sida laga soo xigtay 90min , Man City, Chelsea iyo Liverpool dhamaantood waxay codsadeen in lala socodsiiyo wixii ku soo kordha mustaqbalka xidiga South America.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in dhibaatooyinka dhaqaale ee kooxda Inter ay la micno tahay in kooxda ay diyaar u tahay inay dhageysato dalabyada u imaanaya weeraryahankaan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Chelsea iyo Man City ayaa lagu soo waramayaa inay aaminsan yihiin in Martinez uu noqon lahaa dookh ka jaban Erling Braut Haaland iyo Harry Kane .